काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सुनको भाउ यो साता कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार थोरै बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ बिहीबार तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको हो । भाउ बढेसँगै सुन प्रतितोला छापावाल ७६ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७५ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बुधबार सुनको तोलामा २०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला...
काठमाण्डौ । यो साता चौथो कारोबार दिन बुधबार सुनको भाउमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजोको तुलनामा सुनको भाउमा तोलामा २०० रुपैयाँले गिरावट आएको छ। यो गिरावटसँगै प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार ७०० र तेजाबी सुन ७५ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार पनि सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको भाउ थोरै घटेको छ । चाँदीको भाउ भने लगातार तीन दिनदेखि स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ मंगलबार तोलामा १०० रुपैयाँले घटेको छ । आज सुन प्रतितोला छापावाल ७५ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी ७५ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको भाउ आइतबार तोलामा ४००...
काठमाण्डौ । बढ्दो सुनको भाउले यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको हो । तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७६ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७५ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत साता अन्तिम कारोबार दिन सुनको भाउ...
कारोबारको अन्तिम दिन सुनको भाउ फेरि चम्कियो, समग्रमा यो साता रु. १ हजारले घट्यो
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल ७५ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी ७५ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । सुनको भाउ बिहीबार र बुधबार प्रतितोला छापावाल ७५ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी ७४ हजार...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ फेरि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ । चीनमा महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी...
आज सुनको भाउ घट्यो, समग्रमा यो साता तोलामा रु. ५०० ले बढ्यो
काठमाण्डौ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेर सुन प्रतितोला छापावाल ७६ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७५ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बिहीबार सुनको भाउ एकैपटक तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल ७६ हजार ३०० रुपैयाँ र...
उचाइ चुम्दै सुनको भाउ, आज तोलामा कति बढ्यो ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार सुनको भाउ तोलामा एकैपटक ७०० रुपैयाँले बढेको छ । कोरोनाभाइरसको चपेटामा परेको विश्वबजारमा सुरक्षित लगानीका लागि सुन लगानीकर्ताको मुख्य रोजगाइ बनेसँग यसको माग र भाउ बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको हो । सुनको भाउ बिहीबार तोलमा ७०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको छ । कोरोनाभाइरसको चपेटामा परेको विश्वबजारमा सुरक्षित लगानीका लागि सुन लगानीकर्ताको मुख्य रोजाइ बनेसँगै यसको माग र भाउ बढिरहेको बेला नेपालमा भने घटेको हो । सुनको भाउ सोमबार र मंगलबार स्थिर रहँदै बुधबार घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी...
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी प्रभाव : सुन प्रतितोला रु. ९४ हजार पुग्ने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । महामारीका रुपमा फैलिएको प्राणघातक कोरोनाभाइरसका कारण सोमबार विश्व बजारमा बहुमूल्य धातु सुनमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बर्सिएको छ । जसका कारण अहिले सुनको मागसँगै भाउ गत वर्षभन्दा २० प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । कोरोनाभाइरसले खस्किएको विश्व अर्थतन्त्रमा तत्कालै कुनै सुधार आउने कुनै संकेत नदेखिएकाले निकट भविष्यमा सुनको भाउ...
कोरोनाभाइरसको प्रभाव, सुनको भाउ फेरि उचाइतिर, आज कति ?
काठमाण्डौ । विश्वमा कोरोना भाइरसको आतंक सिर्जना भएसँगै सुनको भाउ फेरि उचाइतिर अगाडि बढ्न थालेको छ । कोरोना भाइरसले विश्व बजारमा इन्धन, सेयरजस्ता क्षेत्रमा लगानी घट्नुसँगै सुनको माग बढ्न थालेपछि भाउ बढ्न थालेको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीमा पनि देखिन थालेको छ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ यो साताको कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार...
सुनको भाउ माघ महिनाकै उच्च विन्दुमा, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ यो साता पहिलो कारोबार दिन आइतबार तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेर माघकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । लगातार बढिरहेको सुनको भाउ आइतबार प्रतितोला छापावाला ७५ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी ७५ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ । जुन माघ महिनामा हालसम्मकै उच्च हो । गत साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला...
काठमाण्डौ । सुनको भाउ यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजोको तेलनामा तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७५ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बिहीबार सुनको प्रतितोला छापावाल ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७४ हजार...
सुनको थोरै उकालो लग्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । यो साताको पाँचौँ कारोबार दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजोको तुलनामा आज बिहीबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको हो । हिजो बुधबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले...
सुनको भाउमा उतारचढाव कायमै, आज कति घट्यो?
काठमाण्डौ । चौथो कारोबार दिन बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ घटेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो मंगलबार तुलनामा आज बुधबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ घटेर प्रतितोला छापापाल सुन ७४ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७५ हजार ३०० र...